Akụkọ - ụzọ ịcha dị iche iche nke igwe ịcha laser
Ụzọ dị iche iche nke ịcha igwe laser
Mbelata laser bụ usoro nhazi kọntaktị na-enwe ike dị elu yana njikwa njikwa njupụta dị mma. A na -etolite ntụpọ laser nwere njupụta ike dị elu mgbe ọ gbadochara anya na laser, nke nwere ọtụtụ njirimara mgbe ejiri ya belata. Enwere ụzọ ụzọ anọ dị iche iche nke ịkpụ laser iji lebara ọnọdụ dị iche iche anya.
1. Mgbapu agba
Na ịchacha laser, a na -ewepụta ihe gbazere site na ikuku mgbe agbazechara ebe ọrụ na mpaghara. N'ihi na nnyefe nke ihe na -eme naanị na ọnọdụ mmiri mmiri ya, a na -akpọ usoro a ịcha ọkụ laser.
Osisi laser nwere ịdị ọcha dị elu nke inert na -eme ka ihe gbazere hapụ ebe ahụ, ebe gas n'onwe ya anaghị etinye aka na ịcha. Mbelata laser na -agbaze nwere ike nweta oke nbelata karịa ịkpụ gasification. Ike achọrọ maka gasification na -adịkarị elu karịa ike achọrọ iji gbazee ihe. N'ịkpụcha ọkụ laser, a na -etinye akụkụ nke laser naanị akụkụ ya. Oke ọsọ ọnwụ kacha na -abawanye site na mmụba nke ike laser, ma na -ebelata ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntụgharị na mmụba nke ọkpụrụkpụ efere na ihe na -agbaze okpomọkụ. N'ihe banyere ike laser ụfọdụ, ihe na -amachi oke bụ nrụgide ikuku na nchaji na conductivity thermal nke ihe ahụ. Maka ihe ndị e ji ígwè na titanium mee, ịkpụchasị laser nwere ike nweta notches oxidation. Maka ihe nchara, njupụta ike laser dị n'etiti 104w / cm2 na 105W / cm2.
N'ime usoro ịkpụ gas gas laser, ọsọ nke ihe ọkụkụ dị elu na -ebili ruo ebe okpomọkụ na -esi ngwa ngwa nke na ọ nwere ike zere mgbaze nke ndapụta ọkụ na -ebute, yabụ ụfọdụ ihe na -abanye n'ime uzuoku wee pụọ, na ụfọdụ ihe na -efepụ na ala ịcha akwa site na ikuku inyeaka dị ka ejecta. A chọrọ ike laser dị elu na nke a.
Iji gbochie vepo ihe ahụ na -agbada na mgbidi gbawara agbawa, ọkpụrụkpụ nke ihe ahụ ekwesịghị ịdị ukwuu karịa dayameta nke eriri laser. Ya mere, usoro a dabara naanị maka ngwa ebe ekwesịrị izere mkpochapu ihe gbazee. N'ezie, a na-eji usoro a naanị n'ọhịa pere mpe nke iji alloys sitere na igwe.
Enweghị ike iji usoro a maka ihe ndị dị ka osisi na ụfọdụ seramiiki, nke na -anọghị na nke a gbazere agbahapụ na o yighị ka ọ ga -ekwe ka vepo ihe ahụ megharịa. Tụkwasị na nke a, ihe ndị a na -enwerịrị ị nweta oke ịkpụ. Na mbepụ gasification laser, ileba anya kacha mma dabere na ọkpụrụkpụ ihe na ịdị mma nke osisi. Ike Laser na ikpo ọkụ nke ikuku na -enwete nwere mmetụta ụfọdụ na ọnọdụ ihu igwe kacha mma. Ọsọ ọsọ kacha kacha dị oke ọnụ na oke ikuku nke ihe mgbe edoziri ọkpụrụkpụ nke efere ahụ. Njupụta ike ọkụ laser achọrọ karịrị 108W / cm2 ma dabere na ihe ahụ, belata omimi na ọnọdụ mgbado ọkụ. N'ihe banyere oke ọkpụrụkpụ nke efere ahụ, na -eche na ike laser zuru oke, oke ịbelata oke na -ejedebe site na ọsọ ụgbọ elu gas.
3.Mgbawa agbaji agbaji
Maka ihe ndị na-emebi emebi nke dị mfe imebi site na oke ọkụ, oke ọkụ na mbelata njikwa site na ikpo ọkụ ọkụ laser ka a na-akpọ ịkpụbi mgbaji a na-achịkwa. Isi ihe dị na usoro ịkpụ a bụ: ọkụ laser na -ekpo ọkụ obere mpaghara nke ihe na -emebi emebi, nke na -ebute nnukwu gradient na nnukwu nrụrụ arụ ọrụ na mpaghara a, na -eduga na mgbawa nke ihe ahụ. Ọ bụrụhaala na -ejigide gradient na -ekpo ọkụ, ọkụ laser nwere ike iduzi ọgbọ mgbawa n'akụkụ ọ bụla achọrọ.
4.Oxidation agbaze ọnwụ (laser ire ọkụ ọnwụ)
N'ozuzu, a na -eji gas inert maka agbaze na ịcha. Ọ bụrụ na ejiri oxygen ma ọ bụ gas ọzọ na -arụ ọrụ kama, a ga -amụnye ihe ahụ n'okpuru irradiation nke ọkụ ọkụ laser, a ga -ewepụtakwa ebe okpomọkụ ọzọ n'ihi mmeghachi omume kemịkalụ siri ike na ikuku oxygen iji mee ka ihe ahụ dịkwuo ọkụ, nke a na -akpọ mgbaze ọzeze na ịcha. .
N'ihi mmetụta a, mbelata nke nchara nhazi nwere otu ọkpụrụkpụ nwere ike ịdị elu karịa nke ịgbaze agba. N'aka nke ọzọ, ịdị mma nke mbepụ ahụ nwere ike ịdị njọ karịa nke mgbaze agbazere. N'ezie, ọ ga -emepụta slits sara mbara, ịdị nkọ doro anya, ịba ụba mpaghara emetụta mpaghara yana ogo ihu ka njọ. Mbelata ire ọkụ Laser adịghị mma n'ichepụta ụdị nkenke na akụkụ dị nkọ (enwere ihe ize ndụ nke ịkụ akụkụ ndị dị nkọ). Enwere ike iji lasers mode pulse na -amachi mmetụta ọkụ, ike laser na -ekpebi ọsọ ịbelata. N'ihe banyere ike laser ụfọdụ, ihe na -egbochi bụ inye ikuku oxygen na conductivity thermal nke ihe ahụ.
Oge nzipu: Dec-21-2020